Home Somali News Somaliland: Musharaxa Ucid Oo Ka Hadlay Cawaaqib Xumadda Ka Dhalanaysa Masuuliyiinta Qaranka...
Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID Mr. Jamaal Cali Xuseen, ayaa sheegay in dadku ka fikiraan inay taageeraan masuuliyiinta qaranka ee jabiya dhaarta ay u mareen Somaliland, kana baxa kibaabka qur’aanka ah ee ay gacanta saareen.
Mr. Jamaal Cali Xuseen oo safar ku jooga dalka Maraykanka, ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay dhibaatada if iyo aakhiro ka dhalan kara ka bixista iyo jabinta dhaarta kitaabka qur’aanka ah gacanta lagu saaro, balse waxa uu xusay in masuuliyiinta dhaartaas beeniya ama ka baxa ay ka sii liitaan dadka taageerada u muujiya iyagoo og inay dhaarta jabiyeen.
“Qodobka 129aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland oo ku saabsan dhaarta waxaa lagu dhaariyaa masuuliyiinta ugu sareeya dalka; sida Madaxweynaha, Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, Guddoomiyaha Guurtidda; waxayna dhaartaasi u dhigan tahay sidan; “Waxa aan Ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo daacad diinta islaamka, dalkayga Somaliland, dadkiisana ku maamulayo sinnaan iyo caddaalad inta aan xilka hayo.” Hadda dhaartan maaha oo keliya (mid u gaar ah) madaxweynaha ee waxaan u jeeddaa masuuliyiinta kale ee qaranka sida goleyaasha qaranka, sida Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo ka Guurtidda iyo kuwa kaleba. Haddaba qofka ka warhaya ee ay u caddahay in masuulka ku dhaartay dhaartaasi uu jebiyey qawlkii uu ummadda la galay iyo kitaabkii uu gacanta saaray ee haddana indho la’aan ku taageeraya, tollow maxaa isagana aakhiro u yaal? Ninka beenta ku dhaartay, waxaa ka sii waalan oo ka sii liita qofka beentaasi arkaya ee haddana indho adkaan la soo taagan ee ku taageeraya iyagoo danneynaya qabyaalad iyo dano yar oo shakhsi ahaaneed,” ayuu Jamaal Cali Xuseen ku yidhi qoraalkiisa.
Somaliland: Xildhibaan Dheeg Oo Sheegay Inaanay Maxkamaddu Wax Faro-galin Ah Ku Lahayn Muddo Kordhinta Iyo Arrimaha Doorashada, Kana Jawaabay Hadalkii Muuse Biixi